Qaramada Midoobay oo sheegtay in dembiyo dagaal ka dhaceen Tigray
Home WARARKA Qaramada Midoobay oo sheegtay in dembiyo dagaal ka dhaceen Tigray
NEW YORK-(Berberanews)-Madaxa xuquuqda aadanaha QM ayaa maanta weydiisatay Ethiopia inay ogolaato kormeerayaal yimaada gobolka Tigray, si ay baaritaan ugu sameeyaan warbixino la xidhiidha dilal iyo rabshado galmo, oo laga yaabo inay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal oo gobolka ka dhacayey tan iyo daba-yaaqadii 2020.
“Dhibanayaasha iyo kuwa ka bad-baaday xadgudubyadan waa inaan loo diidin xuquuqda ay u leeyihiin runta iyo cadaaladda,” ayey Michelle Bachelet ku tiri bayaan ay soo saartay, ayada oo muujisay inay ka cabsi qabto in xadgudubyada ay sii socdaan, haddii aan la helin baaritaan dibedda ah.
Dagaal u dhaxeeya ciidamada federaalka Ethiopia ee ra’iisul wasaare Abiy Ahmed iyo kuwa ururka xukuma gobolka ee TPLF ayaa dilay kumanaan qof, kuna qasbay boqolaal kun oo kale inay ka qaxaan guryahooda.
“Xadgudubyo darran oo ka dhan ah xeerarka caalamiga ah, oo ay suurta-gal tahay inay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bani’aadannimada, ayaa waxaa suurta-gal ah inay gaysteen dhinacyo kala duwan,” ayey tiri Bachelet, ayada oo xustay ciidamada Ethiopia, TPLF, Militariga Eritrea iyo ciidamada gobolka deriska ah ee Amxaarada.
Warbixinta Bachelet ayaa sheegtay in 136 kiis oo kufsi ah lasoo weriyey intii u dhaxeysay December illaa January, ayada oo ay jiraan tilmaamo muujinaya kuwa badan oo aan lasoo werin. Waxay sidoo kale xustay kiisaska dilal ula kac ah oo loo gaystay shacab.
Dowladda Abiy, maamulka Tigray, TPLF iyo sidoo kale kale mas’uuliyiinta Amxaarada iyo Eritrea ayaan laga helin jawaab deg deg oo ku aadan bayaanka QM.
Ayada oo goobjoogeyaal ay xuseen kiisas xadgudub, oo ay ka mid yihiin dil, bililiqo iyo xasuuq ka dhan ah qaxooti, ayaa dhinacyada dagaalamaya waxa uu midba mid kale ku eedeyey dhibaatada dhacday.
Abiy ayaa guul sheegtay markii TPLF ay ka baxday caasimadda gooblka ee Mekelle, dhammaadkii bishii November 2020, hase yeeshee dagaal hoosaad ayaa kasii socday meelaha qaar, sida ay sheegeen dad ku sugan Tigray iyo qiimeynta QM.
“Warbixino laga naxo oo ku saabsan kufsi iyo rabshado jinsi ku saleysan, dilal ka baxsan cadaaladda, burbur baahsan iyo bililiqeysiga hanti dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay, oo ay gaysanayaan dhammaan dhinacyada, ayaa nalala wadaagayaa,” ayey tidhi madaxa xuquuqda aadanah ee QM Michelle Bachelet.
Dowladda madaxweyne Isais Afwerki ee Asmara ayaa horey u beenisay inay wax lug ah ku leedahay dagaalka, halka maamul Abiy ee Addis Ababa, uu marar badan ku celiyey inuus oo celinayo amarka iyo kala dambeynta.
Xafiiska Abiy ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii ku sheegay inuu baarayo tuhunada ku saabsan xadgudubyada, uuna cadaaladda horkeeni doono kuwa gaystay.
Previous article“Wuxuu Ahaa Fal Masiibo Ah Oo Lasoo Abaabulay” Maamulaha Guud Ee Nuuradiin
Next articleMadaxweyne Geelle oo ka hadlay sababta uu markii shanaad isu sharraxayo